जान्नुहोस् ! नेपालको भू-उपग्रह बोकेको रकेटमा अन्य के के छन् त ?
अप्रील 18, 2019 अप्रील 18, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments नास्ट, भू–उपग्रह, रकेट
उक्त अन्तरिक्ष यानले ७६ सय पाउण्ड सामाग्रीहरु बोकेर उडेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुका लागि आवश्यक शोध, सप्लाइ र हार्डवेयर सामाग्रीहरु बोकेर यान त्यसतर्फ उडेको हो । यानले नेपाल, जापान र श्रृलंकाका स्याटेलाइटका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु बोकेर उडेको छ । नेपाली भू-उपग्रहलाई एन्टोरस नामको अन्तरिक्ष यानमा रहेको सिग्नस कार्गो बिमानले बोकेको छ । सानै आकारको भएपनि नेपाली स्याटेलाइट प्रक्षेपण भएपछि विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूले सामाजिक संजाल मार्फत खुशी व्यक्त गरिरहेका छन् ।
अन्तरिक्ष यानमा ४० वटा जीवित मुसाहरु पनि पठाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा काम गरिरहेका ६ जना कर्मचारीहरुले यो सबै सामान प्राप्त गर्नेछन् । मुसाहरु भने एन्टी टिटानस भ्याक्सिनको प्रभावकारिता परिक्षणका लागि पठाइएको हो । २० वटा मुसालाई अन्तरिक्षमा भ्याक्सिन दिइनेछ भने अरु २० वटालाई दिइने छैन । पृथ्वीमा आइसकेपछि ती मुसाहरुले भ्याक्सिनमा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउनेछन् भन्नेबारे वैज्ञानिकहरुले खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेछन् ।
← नेपालको भू-उपग्रह बोकेको रकेटको प्रक्षेपण (भिडियो सहित)
नेपालको भू-उपग्रह बोकेको रकेटमा किन मूसा पठाइयो ? →